Article submitted by: minkyaw thuyein on 21-Jun-2013
ပင်လယ် လိပ်ကြီး ရေထဲ လွှတ်မလို.တဲ့ လား?
“ ဖယ်ဒရယ်ဆိုသည်မှာ ခွဲထွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပေါင်းစည်းနေထိုင်၍ အာဏာက
ို ခွဲဝေသုံးစွဲရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြော
ကြား” တဲ့ ။ ဒီသတင်းဖတ်လိုက်ကြရမှာပေါ့နော် ။ သူ ဒီလိုထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောလာ
ရတာ ကတော့ အကြောင်း တွေရှိပါ လိမ့်မယ် ။
ဟုတ်ရဲ.လား ကိုရင်ရွှေမန်းရဲ. ? ပျားရေနဲ့ ၀မ်းချနေပြန်ပြီထင်တယ် ။ ဒီလိုဆို အဆိုးထဲက ကောင်းသားဘဲ လို.ပြောရမလား ၊ အဆိုးနဲ အကောင်းကတော. ဒွန်တွဲနေတာဘဲ။ ဖယ်ဒရယ် တည်ထောင်မှာမို ကြိုတင် လေသံပေးနေတာ
လား? အခုရောဘာထူး လို.လဲ? ပြည်နယ်တွေ ပြည်နယ် အစိုးရတွေနဲရှိနေတာ
ဘဲ ။ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲတဲ့ ဒရယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ဟိုနေ.ကဘဲ ကျုပ်ပြောမိသေးတယ် ။ ကိုယ့် အမြင် ကိုယ့် ရှုဒေါင့်ပေါ. လေ။
၆၅ ကြာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု သူပုန်ဆိုတာတွေကို နားလယ်
သဘောပေါက် လက်ခံအောင်ကြိုးစားပါအုံး။ သူတို.နားမလည်၊ လက်မခံလို.လဲ
အခုလို ထုပ်ပြောရတယ်လို.ယူဆရတယ် ။ ဦးခွန်ထွန်းဦးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဦးအေးသာ
အောင်က ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို. အယူအဆနဲ ဘာဘဲ ပြောကြပြောကြ ။ ရှမ်းတိုင်း
ရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက “ ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကဖက်ဒရယ်ဆိုသည် ကိုခွဲထွက်ခြင်းဟုယူဆကာ စိုးရိမ်မှုများ ရှိခဲ့
သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဖက်ဒရယ်ဆိုသည်မှာ ခွဲထွက်ခြင်းမဟုတ်ဆိုသည်ကို
လက်ခံ လာသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် ဆက်လက်တောင်းဆို ရသည်မှာ အားရှိလာကြောင်း ပြောကြားထားသည် လို.လဲ သတင်းမှာ ဖေါ်ပြ
၁၉၄၈ ခု ဖွဲ.စည်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး ၁၉၆၁ ခုနှစ်မြန်မာရုပ်သံလွှင့် အဆောက်အဦးခန်းမကြီးမှာ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ တဲ့. နှီးနှောပွဲ အတွက် ၀န်ကြီးချုပ်
ဦးနူပြောသွားတဲ့ စကားမှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖွဲ.စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကရင်နဲ့ကယားကို ခွဲပေးရမယ်လို.ဆိုထားတယ် ။ သူရေးတဲ့
“တာတေစနေသား” စာအုပ်ထဲမှာလဲ ဒီအတိုင်းဘဲ အတိအလင်းပြောထားတယ်။
ကရင်နဲ.ကယားကို ပေးရင် ကျန်သူတွေကိုလဲ ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်
တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေ တောင်ရှိခဲ့လို. ဗိုလ်နေ၀င်း ၀င်ပြီး လူမိုက်လုပ်ခဲ့ရ
တယ် လေ။ မေ.နေပြီလား ကိုရင်တို. ?
မြန်မာတိုရဲ. အနွယ်လို. ဆိုရင် ဆိုလောက်တဲ့ မွန်ဂိုအင်ပိုင်ယာ တည်ထောင်သူ ဂျက်ဂစ်ခန်( တမူဂျင်) က "If my body dies, let my body die, but do not let my country die. ဆိုတဲ စကားကို ယူခဲ့ပုံရတယ် ၊ A man's greatest work is to break his enemies, to drive them before him, to take from them all the things that have been theirs, to hear the weeping of those who cherished them." ဘယ်သူတွေ က ဘယ်လိုယူဆတယ် ဆိုတာ
လဲ သူတိုအယူအဆနဲ့သူတိုမို.မှားသည် မှန်သည် လို.မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်း. ကြောင်.အကျိုးဖြစ်ရတယ် ဆိုတာကိုတော့ နားလည်သဘော
ပေါက် လက်ခံတယ် ။
“စစ်အစိုးရ ယူဆတယ်” ဆိုတဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦးပြော စကား အသုံးအနှုန်းကိုဘဲ ထောက်ပြရရင် ၊ အကယ်လို.သာ ၁၉၆၂ ခုက စစ်ဖက်က လက်မဦးခဲ့ရင် ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ မစ္စတာ ခွန်ထွန်းဦးက သူ.ရဲ လွတ်လပ်တဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကလေး တောင် ထည့်ပြောမသွားဘူး ကိုး၊ မီမီသိုက် တယောက် မတော်တဆ သေဆုံးရမှုကိုစစ်တပ်ပေါ်မှာ ရော၊ ဗိုလ်နေ၀င်းပေါ်မှာ
ပါ အခဲ မကျေနေပုံရှိတယ် ။
စစ် အစိုးရ (တပ်မတော်)ဟာ. လူမျိုး၊ ဘာသာ မရွေး တို.နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတော်
မှာ၊ နိုင်ငံတော်နဲ.နိုင်ငံသားအားလုံးကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရန်အသွယ်သွယ်မှကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တယ် ၊ ပြောရမယ် ဆိုရင် ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား လူမျိုးစုတွေထဲက အစွန်းရောက် လက်နက်ကိုင် အစုစု ရဲ.အန္ဆရယ် ကို ကာကွယ် နေခဲ့ တာ ဘဲ။ သမိုင်းကြောင်း ပြန်ကြရအုံး မလိုလို၊ ဒီလိုသာဆို ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။
အခုတောင် ကချင်သူပုန်ဆိုတာတွေက သူတို နယ်ထဲ အစိုးရတပ် မ၀င်ရ လို. ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာ ခံနေရတယ် ၊ ကြည့်စမ်းပါအုံး “သူတိုနယ်” တဲ့ လေ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဘယ်သူအစိုးရလဲ မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာ့မြေကိုဘယ်သူပိုင်သလဲ ?
ကချင်ရဲ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ကချင့်နောက်မှာ လိပ် နဲ့ ကန်တို.လိုက်ပါ လာပြီး
တရုတ်ပြည်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေနွေးခဲ့ကြလို. မအောင်မြင်ခဲ့ရဘူး ဆိုတာလဲ ကိုရင် ရွှေမန်းအသိသားနဲ.၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို. မှာ လိပ်/ကန် မပါဘဲ ဆွေးနွေးကြတော့ ပြီးခဲ တဲ့ သတင်းပါတ်ထဲကမှ ယာယီအပစ်အခတ်
ရပ်ဆဲရေး ရခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကိုရင်လဲ အသိသားနဲ့ ။ ဒါတွေ ဟာ ပေါ့ပေါ့ တန်တန် မဟုတ်ဘူး ကိုရင်ရဲ.။
မှန်ပါတယ် . နိုင်ငံရေးဆိုတာ မျဉ်းကြောင်းလို ဖြောင်ဖြောက်တန်းတန်ကြီးတော့
့မဟုတ်ပါဘူး ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတဲ့စကား နဲ့သာမန်လူတွေ ပြောတဲ့ စကားဟာ သံတူကြောင်းကွဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံဆို
သလိုပေါ.။ ဥပမာပြောရရင် အိမ်သာ ၊ရေအိမ် ၊ ကုဋီ ဆိုတာတွေဟာ သူ.နေရာ
နဲ့ သူ သင့် သလို ခေါ်ဝေါ်ကြတာဘဲ ၊ အားလုံးကတော ချီးပါ သေးပေါက်ဘို. သီးသန်. ဆောက်ထားတဲ့ ချီးတွင်းတွေ ဘဲ လို. ရိုးရိုးခေါ်ရင်လဲ ရပါတယ် ။
၆၅ နှစ် တွင်းမှာ စိတ်နေသဘောထားပြောင်းလာကြတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ စစ်
စကား အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရရင် မဟာဗြူဟာ မပြောင်း လဲဘဲ နည်းဗြူဟာ ပြောင်းလဲ လာတာလို.လဲ ဆိုနိုင်တယ် ။ ခရီးလမ်းကတော့ မဆုံးသေးပါဘူး ၊ လမ်းဆုံးရင် ရွာတွေမယ်လို.မြန်မာ စကား ရှိထားတယ်။သတိတော့ထားရလိမ့်
အသိတရားနဲ့ အကြောက်တရားဟာလဲ ဒွန်တွဲနေတာပါ၊ စည်းကမ်းဆိုတာ အကြောက်တရားမပါဘဲ သွတ်သွင်းလို.မရပါဘုး။ အကြောက်တရားမှ ကင်း
လွတ်ခြင်ရင် ၊ အသိတရားတွေ ရှိရမယ် ၊ စည်းကမ်း ရှိကြရမယ် ။ နိုင်ငံတခု
တည်ထောင်ရာမှာ လဲ အကြောက်တရား မပါဘဲ မပြည့်စုံ နိုင်ဘူး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ
မှာ အကျဉ်းထောင်တွေ ဖျက်သိမ်းစေလိုရင် ရာဇ၀တ်သားတွေ သေဒါ့ဏချမှတ်
တော်သေးပြီး နောက်ကြုံမှ ဆွေးနွေးအုံး မယ်။